4Beds PrivateCozyRoom-HeniSi Homestay
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguVy
IHeniSi yiHomestay enkulu kakhulu eneVilla enye enamagumbi ayi-7 abucala, iibungalows ezili-10, indawo yokulala enkulu eyenziwe ngomthi, kunye namagumbi ama-4 abucala! Ibekwe ngokufanelekileyo kwisitrato esikhulu kwaye ikufutshane nayo yonke into eMang Den!
Igumbi lokulala labucala le-4 likumgangatho we-2 weVilla yethu. Ilungele ngokupheleleyo iqela labahlobo okanye usapho olufuna ukuhlala kude nezihlwele zesixeko kunye nengxolo!
Ikwanayo negumbi lokuhlambela labucala, iibhedi ezi-4 ezimbini, kunye ne-balcony yabucala epheleleyo ejonge kwisitrato esikhulu!
IHenisi Homestay Mang Den isembindini weMang Den kwaye imi kanye kwisitrato esikhulu ekulula kakhulu ukuba usifumane! Ngaphandle koko, ikufuphi kwiindawo ezininzi ezinomtsalane kubakhenkethi esivuyayo ukukubonisa eyona ndlela isebenzayo yokufika apho!
Umbuki zindwendwe ngu- Vy
Sihlala sizama ukugcina umoya omnandi kunye nobuhlobo kunye nesantya esisebenzayo. Kodwa siyaqonda ukuba iindwendwe zethu ngamanye amaxesha ziya kufuna indawo yazo! Yiyo loo nto kuya kuhlala kukho ubuncinane abasebenzi omnye kwi-villa ekhoyo ukuze ufumane uncedo ukuba ufuna nantoni na!
Sihlala sizama ukugcina umoya omnandi kunye nobuhlobo kunye nesantya esisebenzayo. Kodwa siyaqonda ukuba iindwendwe zethu ngamanye amaxesha ziya kufuna indawo yazo! Yiyo loo nto ku…